Ireo mpiady vehivavy 15 tsara indrindra ao amin'ny Mortal Kombat | la-manette.com
Ireo mpiady vehivavy 15 tsara indrindra ao amin'ny Mortal Kombat
Janoary 6 2022 9 février 2021 feh JEAN-MICHEL CAPPIN
Avy amin'ireo anarana lehibe ao amin'ny Mortal Kombat toa an'i Mileena sy Sonya Blade ka hatramin'ireo vao tonga toa an'i D'vorah, ireto ny sasany amin'ireo vehivavy masiaka indrindra amin'ny karazana.
Ny andiany Mortal Kombat dia feno mpiady isan-karazany. Inona koa no azontsika antenaina amin'ny iray amin'ireo franchise lalao miady malaza indrindra? Na izany aza, ampahany kely amin'ireo mpiady ireo no vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy mpiady. Na izany aza, satria vitsy dia vitsy ny mpilalao vehivavy hilalao dia tsy midika izany fa tsy dia mahafinaritra loatra ny fampiasana ireo mpiady ireo noho ny lehilahy.
HAFA: Ny lalao ady akaiky 8 VR akaiky indrindra
Raha toa ny endri-tsoratra toa an'i Sub-Zero sy Raiden dia fototra fanta-daza amin'ny lalao Mortal Kombat rehetra, ny mpilalao toa an'i Sonya Blade sy Cassie Cage dia namela ny marika tamin'ny andiany ihany koa. Andeha hojerentsika ny sasany amin'ireo vehivavy mpiady mahery indrindra amin'ny lalao vaovao.
Nohavaozina tamin'ny 16 Jolay 2020 avy amin'i Amanda Hurych: Tsy hivoaka ny andiany Mortal Kombat. Midika izany fa ny fidirana vaovao tsirairay amin'ny franchise dia mampanantena fahafahana ho an'ny mpilalao handray mpiady vehivavy vaovao amin'ny tantara. Miaraka amin'ny fitantarana mivoatra dia mety ho vaovao tsara ihany izany. Izany hoe, andao hojerentsika ny tontolon'ny Mortal Kombat, mametaka ny anaram-boninahitra tsirairay mba hahitana ireo vehivavy mpiady tsara indrindra azon'ny mpilalao ankafizina. Amin'ny ho avy dia mety hahazo fankasitrahana bebe kokoa noho ny fandraisany anjara amin'ilay andian-tantara ireo mpilalao ireo.
1 - Sony Blade
Sonya Blade no vehivavy voalohany tamin'ny andiany Mortal Kombat. Nanao ny fisehoany tamin'ny lalao voalohany izy ary efa saika ny lalao Mortal Kombat rehetra hatramin'izay. Toetra tena kinga izy, ary ny fomba filalaovany dia ny hafainganam-pandeha.
Miompana amin’ny ady akaiky, melee, ary lalao vao haingana dia mampiditra teknolojia bebe kokoa amin'ny hetsika manokana ataony, toy ny fanariana drone sy grenady manaitra. Manana karazana hetsika miavaka izy io. Amin'ireo vehivavy rehetra ao amin'ny andiany, i Sonya no voalohany sy tsara indrindra amin'izy rehetra.
Kitana dia iray amin'ireo vehivavy mpiady malaza indrindra amin'ny andiany Mortal Kombat. Niseho voalohany tao amin'ny Mortal Kombat II izy, ary ny fampiasana mpankafy nandritra ny ady dia nahatonga azy ho mpifaninana matotra. Nanana fahafahana nanipy ny mpankafy azy ho eny amin'ny rivotra izy, namely ny mpifanandrina tamin'ny fitsambikinana (tsy maintsy nohamafisina io fahaiza-manao io tamin'ny farany mba hahatonga ny ady amin'i Kitana ho maivana kokoa).
Ao amin'ny tantara, amin'ny ankapobeny i Kitana dia manana fahatsapana matanjaka ny tsara sy ny ratsy. Nijoro teo anatrehan'i Shao Khan izy rehefa tsapany ny lalana maizina nitarihany azy, ary voaporofo fa iray amin'ireo hery azo itokisana indrindra amin'ny fampisehoana izy.
Jade dia nanomboka ny fiainany ho toetra miafina sy tsy azo lalaovina ao amin'ny Mortal Kombat II. Sahala amin'i Kitana mihitsy izy, saingy tamin'ny loko hafa. Raha vao azo nilalao ny toetrany, dia namolavola ny toetrany sy ny fombany i Jade ka nahatonga azy ho iray amin'ireo vehivavy mpiady tsara indrindra amin'ny andiany Mortal Kombat.
Vakio ihany koa: Top 10 môtô elektrika tsara indrindra misy seza
HAFA: Ny mpifehy 11 tsara indrindra amin'ny lalao ady arcade
Mampiasa tehina sy “razorange” roa izy mba handresena fahasimbana goavana amin'ireo mpifanandrina aminy. Afaka manao hetsika antsoina hoe Dodging Shadows koa izy, izay mamela ny projectiles handalo azy tsy handratra azy. Ao amin'ny tantara, Jade dia tsy mivadika tanteraka amin'i Kitana ary miasa ho mpiaro azy. (Tsy hoe mila fiarovana be i Kitana).
4 - D'Vorah
D'Vorah dia toetra tsy manam-paharoa, nampidirina tamin'ireo mpilalao tao amin'ny Mortal Kombat X. Manana fiaviana amin'ny bibikely izy, miasa toy ny fanangonana bibikely amin'ny vatan'olombelona. Izany dia mamela azy, mazava ho azy, hanao hetsika ady tena mahaliana.
Ny halavirana no lalaony, satria i D'Vorah dia afaka manipy ny bibikely ao anatin'ny vatany amin'ny mpifanandrina aminy. Mety hahafaty ireo bibikely ireo, indrindra satria mety hanapoizina ny mpifanandrina aminy ny fanafihana sasany ataony. Ny poizina, rehefa mifandray, dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny mpiady hafa rehefa mandeha ny fotoana.
5 - Sheeva
Raha mitady mpiady mahery ianao ao amin'ny Mortal Kombat, aza mijery lavitra an'i Sheeva. Sheeva dia Shokan, firazanana voafaritr'olona ho antsasaky ny olombelona sy antsasa-dragona. Raha toa ka tsy mampiaiky volana anao izany, dia mety ny fomba fiadiana mitam-piadiana efatra.
Amin'ny sandriny efatra, Sheeva dia afaka misambotra ireo mpifanandrina aminy ary mandresy azy ireo amin'ny kapoka be. Azony atao koa ny manipy bala afo mahery izay mandondona ny olona amin'ny tany fa tsy manohana azy ireo. Ary raha tsy ampy izany, dia afaka manao fanosihosena amin'ny tany ihany koa izy izay manimba ny olona rehetra manodidina.
6 - Cassie Cage
Cassie Cage izay zanakavavin'ny mpilalao Johnny Cage sy Sonya Blade, dia mitombina tsara fa ny fahaizany dia fifangaroan'ny ray aman-dreniny. Amin'ny fampiasana ny fahaiza-manaon'ny hery manokana nianarana avy amin'ny reniny, dia azon'i Cassie ny basy poletany roa sy ny fahaiza-manao akaiky amin'ny ady tsy mitam-piadiana.
Izy koa dia manana ny hery mistery an-drainy, izay miseho amin'ny aura maitso manodidina ny vatany rehefa manao hetsika sasany izy. Fanampin'izany, ny tantara dia azo antoka fa manitra miaraka amin'ny fampidirana an'i Cassie ao amin'ny Mortal Kombat X. Mampiseho ny maha-ray aman-dreny an'i Johnny Cage sy Sonya Blade izany.
7 - Mileena
Mihoatra ny klone an'ny Princess Kitana, i Mileena dia biby noforoniny. Farany, ara-teknika dia noforonin'i Shang Tsung tao anaty lavaka nofony izy, fa ny fomba fiadiany no resahina eto. Ny fitambaran'ny Kitana sy Tarkata, Mileena dia manambatra hery tsy mampino miaraka amin'ny hafainganam-pandeha faran'izay haingana.
Aiza no ampiasain'i Kitana ireo mpankafy azy roa, dia aleon'i Mileena mahafantatra azy ireo. Fitaovam-piadiana mahery vaika koa ny nifiny Tarkatan maranitra. Afaka manao “Neckbite” mitsambikina izy izay mampatahotra ny mahita azy. Raha te hampatahotra ny mpifanandrina aminao ianao alohan'ny hanorotoroana azy ireo amin'ny pulp, dia tokony ho iray amin'ireo mpiady ankafizinao i Mileena.
Vakio ihany koa: Ny lalao Android sy iPhone tsara indrindra hilalao an-tserasera
8 - Li Mei
Li Mei dia mpiady matanjaka tokony ho eo an-tanana. Tsy vitan'ny hoe mahay miady amin'ny melee izy, fa manana fahaiza-manao mahagaga ihany koa. Ny fofonainy Nova, ohatra, dia mamela azy handefa afo volomparasy amin'ny mpifanandrina aminy.
Tahaka an'i Frost, i Li Mei dia nampidirina tamin'ny mpilalao tao amin'ny Mortal Kombat: Alliance Deadly. Ny iray amin'ireo zavatra mahaliana indrindra momba an'i Li Mei amin'ny maha-mpiady azy dia ny nananany hetsika manokana efatra tamin'ny lalao voalohany nataony. Ny ankamaroan'ny endri-tsoratra hafa dia manana roa na telo ihany.
9 - Sindel
Toa antitra kely i Sindel, satria manana hidiny volondavenona lava be izy. Aza diso hevitra momba izany. Mpiady henjana izy ary iray amin'ireo mpilalao mahaliana indrindra teo amin'ny tantara. Mpanjakavavin'i Edenia i Sindel, ary tsy tokony hanakorontana azy ianao.
HAFA: Lalao PS Plus maimaim-poana ho an'ny Oktobra 2021: Mortal Kombat X, PGA Tour 2K21, Hell Let Loose
Ny maha-fitondrana ny iray amin'ireo fanjakana tsara tarehy indrindra eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy nanomana azy amin'ny ady rehetra izay handraisany anjara. Ny volony dia azo ampiasaina ho fitaovam-piadiana hisambotra ny mpifanandrina aminy sy hanipy azy ireo. Ary avy eo dia misy ny tomany banshee, izay mety hahataitra fahavalo ary omeo fotoana ho an'ny mpilalao ny hitsidika vitsivitsy.
10 - Kronika
Hatramin'ny nanoratana ity lahatsoratra ity dia tsy mbola mpilalao azo lalaovina i Kronika, fa tompon'andraikitra tsy azo lalaovina ao amin'ny Mortal Kombat 11. Na izany aza, araka ny hitanay azy, dia feno hafanam-po ny fon'ny mpilalao. Ny fahaizany manitikitika ny fotoana sy ny habaka dia mamela azy hanao hetsika tena mamorona amin'ny ady.
Ny fandefasana telefaonina ao ambadiky ny mpifanandrina amin'ny fotoana tsy andrasan'izy ireo, ny famerenana ny fotoana ary ny mpiady mangatsiaka amin'ny toerany dia vitsivitsy amin'ireo fahaizany. Ny mpankafy ny Mortal Kombat dia mitazona ny rantsan-tànany amin'ny fiverenany.
11 - Jacqui Briggs
Miaraka amin'i Cassie Cage, Jacqui Briggs no nanao ny voalohany tamin'ny Mortal Kombat X. Na dia tsy manana ny herin'Andriamanitra amin'ny mpiady hafa aza izy, dia tsy tokony hatao ambanin-javatra izy. Ny fahaizany miady akaiky dia mahatonga azy ho hery azo isaina. Fanampin'izany, manana karazana hetsika maro izy izay afaka manampy ny mpilalao handresy ny mpifanandrina aminy amin'ny rindrina.
Tsy vitan'ny hoe mpiady tena mahafa-po hilalao i Jacqui, fa ny fandraisany anjara amin'ny tantara ihany koa dia ambony indrindra. Ny fahaiza-manaony sy ny fahalalany tetika dia mamela azy ho toy ny foil tsara ho an'ny endri-tsoratra hafa tsy dia marin-toerana.
12 - Cetrion
Aza manaiky ho voafitaka amin’ny fahafoizan-tenan’i Cetrion amin’ny fiainana sy ny zavaboary. Tsy hisalasala izy hampidina ny mpifanandrina aminy ao anatin'ny segondra vitsy. Niseho tao amin'ny Mortal Kombat 11, Cetrion dia andriamanibavin'ny fanekena ny mpiady hafa.
Ny fomba fiadiany dia ny manalavitra ny mpifanandrina aminy, satria tsy mety amin'ny ady akaiky ny fanafihana ataony. Afaka mamorona sakana eo amin'ny tenany sy ny hafa izy, ary afaka manipy vovoka amin'ny fahavalony koa.
Vakio ihany koa: Ny LMG tsara indrindra amin'ny vanim-potoana faha-9 amin'ny Call of Duty Mobile
13 - Fanala
Frost dia nampidirina voalohany tamin'ireo mpilalao Mortal Kombat tao amin'ny Mortal Kombat: Deadly Alliance. Mpianatry ny Sub-Zero izy. Tsy dia matanjaka tahaka ny an'i Sub-Zero ny heriny mangatsiaka - izay mazava tsara ao amin'ny tantara rehefa miezaka ny hitarika an'i Lin Kuei hiala aminy izy - saingy nanonitra izany izy tamin'ny fampitomboana ny hafainganam-pandehany.
HAFA: Deltarune Chapter 2: Ahoana no hahitana ny lehiben'ny miafina
Mba hilalao amin'ny maha-Frost, ny mpilalao dia tsy maintsy manana paikady. Ny ankamaroan'ny hetsika ataony dia mitaky fametrahana mazava tsara, ary manantitrantitra ny fivezivezena. Tsy Sub-Zero izy, fa tena iray amin'ireo tanjany.
14 - Sareena
Ny fanombohana amin'ny toetran'ny lehibe tsy azo lalaovina dia fomba azo antoka hitombo ho mpiady azo lalaovina mahaliana eny an-dalana. Tsy maningana i Sareena. Tamin'ny voalohany lasa mpilalao azo nilalao izy, ny tantarany sy ny fomba fiadiany dia nanampy azy ho fanampiny tsy hay hadinoina amin'ny lisitry ny Mortal Kombat.
Ny habibiany amin'ny ady dia azo lazaina fa demonin'ny Netherme izy. Ny ankabeazan'ny fihetsiny dia misy kapoka be dia be, manana Fatality antsoina hoe "Whirlwind of Doom" mihitsy aza izy.
15 - Nitara
Nitara dia niseho voalohany tao amin'ny Mortal Kombat: Deadly Alliance, ary tsy nomena voninahitra ho mpiady amin'ny andiany izy. Izy dia vampira izay mihinana ny ran'ny mpanohitra azy. Raha tsy miteraka tahotra ao am-pon'ny mpilalao izany, inona no hitranga?
Iray amin'ireo fihetsika tsara indrindra ataony ny Blood Spit, izay mikohaka be amin'ny ra amin'ny mpifanandrina aminy. Na dia nandatsaka ny ran'izy ireo aza i Nitara fa tsy ny fanahiny, dia mbola afaka nanome fotoan-tsarotra ihany i Shang Tsung raha ny amin'ny maha-mpiady mampatahotra azy.
Roblox: Inona no atao hoe Slender?
Lalao PC an-tserasera 30 tsara indrindra azonao atao (maimaim-poana & karama)